Maalinta: Noofambar 10, 2017
10 Fikradda November ee ka timid Demok
Alpaslan Taylan, Gudoomiyaha Ururka Iskuullada Alumni Vocational School of Railways, wuxuu sameeyey bayaan macno leh oo ku saabsan 10 Kasım. “Hogaamiyaha Weyn ee Atat'srk wuxuu u gudbayaa daaqada weligeed ah 10 November 1938 [More ...]
Markii saacaduhu soo bandhigeen 79 sanad-guurada 09.05 ee ka bixitaanka hoggaamiyihii weynaa Mustafa Kemal Atatürk, noloshu waxay ku joogsatay istaagga Sağmalcılar Metro. Rakaabaka sugaya imaatinka tareenka dhulka hoostiisa leh ee garaaca leh. Markuu mawqifka ixtiraamku bilaabmo [More ...]
Iscasilaadii ka dib Maareeyihii Guud ee BURFAŞ Muhammet Gümüşsoy, maareeyihii guud ee BURULAŞ Levent Fidansoy iscasilay isagana waa la eryay. Alinur Aktaş waa duqa magaalada Bursa. [More ...]
Rigoorka Akcaray ee baabuurka la dhiganayay
Baabuur qaldan ayaa la dhigay jidka tareenka. Dhacdadu waxay ka dhacday istaafka Xarunta Bulshada ee Izmit Tram. Tareenka wuxuu awoodi waayey inuu dhaqaaqo sababtoo ah gawaarida wadada la dhigay. Howlaha tram ayaa joogsaday daqiiqadihii 10. Goobta [More ...]
Karşıyaka Xaraashka Maysan arkin dareenka
In kasta oo ay dhaleeceeyeen Dawladda Hoose ee Magaalada Izmir waxay ku bixisay kharash garaynta malaayiin rodol Karşıyaka Taraamka ma uusan arkin xiisaha la filaayay. Tram, niyad jabsan Izmir Metropolitan Municipality oo qandaraaskiisu yahay 390 milyan oo rodol Karşıyaka iyo Balaadhinta [More ...]
YHT waxay tagi doontaa Haydarpaşa dhamaadka 2018
Wasiirka Arslan, wuxuu ka dhaqaaqayaa Ankara kuna socda tareenka xawaaraha sare ee Istanbul, 2018 dhamaadka sanadka, wuxuu aadi doonaa Haydarpasa, ayuu yiri. Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badaha iyo Isgaarsiinta, wuxuu marti ku ahaa kanaal telefishan oo gaar loo leeyahay. Wasiirka [More ...]
Metrobüste codsi cusub!
IMM waxay qaadday talaabo ay kaga hortagayso gelitaanka sharci darrada ah ee loo yaqaan 'metrobus'. Rakaabkii doonayay inay raacaan mitrooga iyagoo adeegsanaya E-5 ayaa had iyo jeer sababa shilal. Ugu dambeyntiina, shalay Merter'de kuwaas oo doonaya inay ka gudbaan caqabadaha inay si sharci darro ah u shaqeeyaan [More ...]
Wasiir Ku-xigeenka Garsoorka ee Samsun Logistics
Wasiir ku-xigeenka Dhaqaalaha Dhaqaalaha ee Isutaga Madaxbannaan ee Adjara ee Georgia, Konstantine Megrelishhvili, Madaxweynaha Adjara TSO Tamaz Shavadze iyo wafdiga la socda ayaa booqday Tuulada Saadka, oo soo gaartay heerkii ugu dambeeyay ee dhismaha, oo ay ka heleen macluumaad masuuliyiinta. a [More ...]
New Express iyo Line Ring ee Samsun
Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun Samulaş A.Ş. khadadka degdegga ah ee cusub ee loo adeegsado xNUMX Noofembar 13 ayaa bilaabanaya adeegga illaa Isniinta. Ku qabashada adeegyada gaadiidka iyagoo matalaya Dawlada Hoose ee Magaalada. on-site [More ...]
Duqa magaalada Yilmaz: 'Odesa-Samsun u dhaxeeya dayuuradda waa inay noqotaa'
Danjiraha reer Ukraine Andrii Sybiha ayaa xafiiskiisa ku booqday Duqa magaalada Samsun Yuusuf Ziya Yılmaz. WAA IN UU U FURNAAN DHAMMAAN DHAQANKA DALKA UGU DANBEEYA DHAQANKA MAGAALADA MUQDISHO Waxaan uga mahadcelineynaa Danjire Andrii Sybiha sida ay u muujisay sida uu ugu faraxsan yahay booqashada [More ...]
Gudoomiyaha Akyürek: "Waxaan dooneynaa in aan soo saaro baabuurka maxaliga ah ee Konya Madaxa
Isagoo ka hadlayey guddiga cinwaan looga dhigay Konya Future of Automotive iyo Xarunta Soojiidashada Konya Mev oo ay soo qabanqaabisay Wakaaladda Horumarinta Mevlana iyo Konya Rugta Wershadaha, Duqa Magaalada Tahir Akyürek wuxuu sheegay in Konya kaliya aysan ahayn xarun wax soo saar beeraha. [More ...]
Digniin ka timid Kocaeli Greatsehir: Ha ha ilaawin inaad fiiso u sameyso kaararka safarka ardayda ee Kocaeli
Waaxda Gaadiidka Dadweynaha ee Magaalada Kocaeli Sida ku xusan bayaan loogu talagalay ardayda kaararka tikidhada safarka tikidhada safarka waxay bilaabeen usbuuca koowaad ee Noofembar. Iyadoo la raacayo, Xeerka Kaararka Safarka ayaa la hirgaliyay [More ...]
RayHaber 10.11.2017 Warbixinta Shirka
Farsameynta, Muujinta, Isgaadhsiinta Isgaarsiinta Isticmaalka Qalabka Arifiye-Mithatpaşa Qalabka Dib-u-hagaajinta Shaqada Adeegga Badbaadada Gaarka ah waa la Helayaa
Dhimashada geerida iyada oo gaadhiga wata!
Saldhigga tareenka ee ku yaal degmada Şehzadeler ee Manisa iyo Isbitaalka Manisa ee heerka gudbinta ayaa qalbiga u keenay afka Manisa, kaasoo had iyo jeer kor u qaada ajendaha, laakiin aan xal loo helin Saldhigga tareenka ee Manisa [More ...]